Inona no tsy mety amin'ny fiaramanidina AirBaltic Airbus? Maotera 50 nosoloina afaka 2 taona monja!
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Inona no tsy mety amin'ny fiaramanidina AirBaltic Airbus? Maotera 50 nosoloina afaka 2 taona monja!
Mpitondra sainam-pirenena Latvian airBaltic (AS Air Baltic Corporation), izay miorina ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Riga ary miasa sidina manerana an'i Eropa, dia nilaza fa tsy maintsy nanolo motera dimampolo tao anatin'ny 2 taona voalohany taorian'ny nanampiana Airbus Fiaramanidina A220-300 mankany amin'ny fiaramanidina.
Nilaza ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka fa ny fanoloana dia nitranga noho ny “antony maro samihafa, ao anatin'izany ny fanoloana nomanina sy voalahatra”, satria ny drafi-pampidirana ny fiaramanidina vaovao dia nitaky “fiheverana fanampiny sy fanavaozana mandritra ny dingana voalohany amin'ny fitrandrahana.”
Ny fiaramanidina Airbus A220-300, fantatra taloha amin'ny anarana hoe Bombardier CSeries, dia nampidirina tamin'ny airBaltic tamin'ny Desambra 2016 ary nanampy ny fiaramanidina faha-14 an'ny maodely tamin'ny faran'ny taona 2018. Ny fiaramanidina tsirairay avy dia misy motera Pratt & Whitney roa. Noho izany, raha niasa fiaramanidina 13 ny mpitatitra tamin'izany fotoana izany, midika izany fa tokony hanao fanovana roa isaky ny maotera isaky ny maotera ny orinasa.
Ny isan'ny fanoloana motera mahavariana dia notaterin'ny mpandinika ny seranam-piaramanidina Alex Macheras taorinan'ny fotoana nanapahan'ny mpitondra saina any Suisse, Swiss International Air Lines (SWISS), ny hampiato ny fiaramanidin'ny Airbus A220 azy ireo vetivety. Nilaza ny orinasa fa sendra “tranga” iray niaraka tamin'ny moteran'ilay fiaramanidina ary te-hanao fitsirihana ny maotera sy ny fizahana betsaka ny fiaramanidina A220 iray manontolo alohan'ny hamerenany azy io amin'ny asany.
Fotoana fohy taorian'ny tranga, ny mpamokatra motera Pratt & Whitney dia nanolotra fanamarinana fanampiny ho an'ny fiaramanidina PW1500G, ilay karazana motera izay manome herinaratra ny Airbus A220, ary koa ho an'ny maotera PW1900G, "hitazomana ny fiaramanidina hiasa."
Ny alakamisy, nametraka ny A220s rehetra azy ny SWISS ary nanohy ny sidina tsy tapaka. Ireo mpampiasa voalohany an'ny A220 dia tsy nanambara ny drafitra hampiato ny fiaramanidin'izy ireo manokana.
AirBaltic dia miasa amina fiaramanidina 20 Airbus A220-300, ary mampiasa Boeing 737-300, 737-500, ary Bombardier DHQ400 ho an'ny sidina ihany koa, saingy mikendry ny hanana fiaramanidina rehetra an'ny Airbus jet.
Misaona ny fizoran'ny filoha teo aloha tany California Avaratra ny fizahantany any Karaiba
Ny Air Tanzania dia mametraka ny filaminana voalohany miaraka amin'i De Havilland ho an'ny fiaramanidina Dash 8-400